Global Voices teny Malagasy » Mampatahotra an’ireo Vitsy An’isa Any Eoropa ny Fifanandrinana Ara-diplaomatika Misy eo Amin’i Torkia sy i Holandy #TulipCrisis · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Marsa 2017 5:46 GMT 1	 · Mpanoratra Akhal-Tech Collective Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Eoropa Andrefana, Holandy, Tiorkia, Fahalalahàna miteny, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fitantanam-pitondrana, Fivavahana, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Mafana
Nandrava ny fifandraisan'i Torkia sy Holandy mpiara-dia aminy ao amin'ny Otan ny fifanandrinana  hafahafa ara-diplomatika  izay nihamafy noho ny fandrahonana fanomezan-tsazy sy fepetra hafa ary nanome vahana ireo firesaka nasionalista tao amin'ny firenena roa tonta.
Nahatonga ny disadisa ny fanakanana ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Torkia Mevlut Cavusoglu tsy hipetraka tao Holandy tamin'ny 11 Martsa ary nentin'ny  manampahefana holandey tany amin'ny sisintanin'i Alemaina ny ampitson'iny i Fatma Betul Sayan Kaya, minisitra Tiorka misahana ny fianakaviana raha nikasa hanatrika ny famoriam-bahoaka teo ivelan'ny masoivohon'ny Torkia ao amin'ny tanàndehibe Holandey ao Rotterdam ny roa tonta.
Nibahana tamin'ny fifanakalozan-kevitra tao amin'ny Twitter ny maha mety na tsia ny fikasan'ny governemanta Tiorka hanao famoriam-bahoaka izay mifandray amin'ny politikany manokana any amin'ny firenen-kafa sy ny valiny mavesatra  avy amin'ny governemanta holandey mikasika ny toe-draharah . Toy izany koa, izay efa nampoizina, ny toetry ny Filoha Torkia Recep Tayiip Erdogan izay nahatonga adihevitra tamin'ny filazany ny governemanta Holandey ho “sisa tavela amin'ny Nazi” sy ny fandrahonany hanome sazy.
Nanambatambatra amin'ny antsipiriany ireo sangy ratsy tsy nahomby mifanesy mahaliana amin'ny teny anglisy  ilay mpandalina Tiorka Aaron Stein tamin'ny alàlan'ny fampiasana ny “governemanta X” rehefa miresaka Holandy ary “governemanta Y” eo amin'ny toeran'i Tiorkia.
Izao no antsoina hoe “manakorontana ny hafatra”. Manaraka ny baikon'ny famoahan-dahatsoratra ny gazety #Tiorka  kanefa vao mainka miha-lalina ny krizy manoloana an'i #Holandy  sy ny hafa
Mandehana ary aza miverina intsony @drbetulsayan  ary ento miaraka aminareo any avokoa ireo mpankafy anareo Tiorka eto Holandy azafady.
Tantaran'i 😐 tsy misy fiafaràny ny #tulipcrisis  kanefa misy fiantraikany azo tsapai-tànana amin'ny maha-olombelona amin'ny fotoana marefo ho an'ireo vitsy an'isa ao amin'ny Vondrona Eoropeana …
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/03/15/96761/
 valiny mavesatra: https://www.youtube.com/watch?v=_aAVzkDlWsM&feature=share
 mifanesy mahaliana amin'ny teny anglisy: https://twitter.com/aaronstein1/status/840592411604725760